Wholesale JS-104 Compound polycarboxylate Superplasticizer 37.5% (Mvura inoderedza mhando) fekitori uye vagadziri | Gaoqiang
JS-104 yekambani yedu yazvino yekutsvaga uye yekuvandudza zvigadzirwa, ichishandisa yazvino nyowani polyether matanhatu kabhoni monomer. Rudzi rwechigadzirwa rune yakaderedza mwero wekuderedza mvura, iri pamusoro kupfuura JS-103, uye ine yakanyanya-yakakwira slump yekuchengetedza kuita. Inonyanya kukoshesa nharaunda ine zvakashata zvinhu kana zhizha rine tembiricha yakakwira. Inofananidzwa neiyo polycarboxylic acid amai doro pamusika, inogona kudzikisa kudyiwa kwekudzivirira kweamai doro ne20% -40% .Iyo inonyanya kushandiswa mune yakasimba-simba kongiri ine yakanyanya kudikanwa, uye zvigadzirwa zvayo zvinonyanya kushandiswa mune yakakwira- kumhanya njanji uye yekumhanyisa njanji njanji Road, hydropower uye mamwe makuru einjiniya mapuro akapomba kongiri, super fluid kuzvishingisa, simba rakakwira uye yakakwira performance kongiri uye yekutengesa kongiri.
1.Iine yakakwira yekuderedza mvura chiyero uye yakakwira slump yekudzivirira mashandiro, kunyanya kune kongiri ine kurasikirwa kukuru munguva.
2.High mvura rutapudzo zvazvingava uye pasi vakapararira velocity.
3.Iyo yakazara mutengo mashandiro ari akakwirira, kunyanya akakodzera zhizha, yakanyanya tembiricha nharaunda.
yakajeka yeyero mvura
Kuderedza Kwemvura Rate
slump chengetedza kukosha (30min）
slump chengetedza kukosha（60min）
Atmospheric Pressure Kubuda ropa rate
Kumanikidza Kubuda ropa Rate
Chlorine Ion (Kubva pane Zvakasimba)
Alkali Yemukati (Kubva pane Zvakasimba)
Sodium Sulphate Zvemukati
Nguva Inonongedza Kutanga Concreting
1.inokodzera yekutanga simba kongiri, yakadzora kongiri, precast kongiri, kukanda-mu-nzvimbo kongiri, kuyerera kongiri, yekuzvipira-compacting kongiri, mizhinji kongiri, yakakwira-kuita kongiri uye yakatarisana nekongiri, ese marudzi ezvivakwa zveindasitiri uye ehurumende zvivakwa. sanganisa nekukanda-in-nzvimbo kongiri, kunyanya kune yakaderera-giredhi yekutengesa kongiri.
Inogona kushandiswa zvakanyanya mumigwagwa yepamusoro-soro, simba renyukireya, kuchengetedza mvura uye mapurojekiti emagetsi emvura, nzira dzepasi pevhu, mabhiriji makuru, nzira dzakakwirira, zviteshi zvengarava uye zvikepe uye mamwe mapurojekiti makuru uye akakosha emunyika.
3.Applicable kune ese maindasitiri uye ehurumende kuvaka uye yekutengesa kongiri yekusanganisa chiteshi
1.This chigadzirwa hachina ruvara kana chakajeka yero mvura. yakakurudzirwa dosi sezviri pazasi: kazhinji, 10% -40% yaamai doro rinoshandiswa kusanganisa zvimwe zvidiki zvigadzirwa kugadzira mvura-kudzora mumiririri.Iyo muyero wemvura-unodzora mumiririri unowanzova 1% ~ 3% yehuremu hwese hwecementitious zvinhu .
3.Ichi chigadzirwa chinogona kushandiswa choga kana kusanganiswa neinononoka-kuburitsa amai doro kunoderedza kongiri yekudonha kurasikirwa (zvichienzaniswa neJS-101B, iyo mashandisirwo emari yekunonoka-kuburitsa amai doro inoda kuderedzwa); Kana mukomboni pamwe anoshanda auxilaries kuwana admixtures pamwe retarder / mangwanani simba / antifreeze / kupomba mabasa. Maitiro ekushandisa uye mamiriro anofanira kusarudzwa nekuyedza uye kusanganisa tekinoroji.
4.Ichi chigadzirwa chinogona kushandiswa pamwechete nemamwe marudzi eepixixtures senge yekutanga simba mumiririri, mweya unopinza mukana mumiririri, retarder, nezvimwewo, uye inofanirwa kuyedzwa isati yashandiswa. Usasanganise naphthalene akateedzana mvura yekudzora.
5.Concrete simenti uye musanganiswa reshiyo inofanirwa kutemerwa bvunzo, Kana uchishandisa, yakavhenganiswa uye kuyerwa mvura inofanirwa kuwedzerwa kana kuwedzerwa kune yekongiri musanganisi panguva imwe chete. Usati washandisa, muyedzo wekusanganisa unofanirwa kuitwa kuti uve nechokwadi chekongiri.
6.Kana paine zvinoshanda zvinonamatira senge nhunzi dota uye slag muchiyero chekongiri, huwandu hwemvura-hunodzora mumiririri hunofanirwa kuverengerwa sehuwandu hwese hwecementitious zvinhu.
Pashure: JS -103 Polycarboxylate superplasticizer 50% (Yakakwira Yekuderedza mhando)
Zvadaro: BT-302 Polycarboxylate superplasticizer 40% (Yakakwira slump yekuchengetedza mhando)